ယောက်ျား ဘ,သား …….ဘလား ဘလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ​ယောက်ျား ဘ,သား …….ဘလား ဘလား	8
​ယောက်ျား ဘ,သား …….ဘလား ဘလား
Posted by naywoon ni on Sep 20, 2015 in Poetry | 8 comments
​ယောက်ျား ဘ,သား …….ဘလား ဘလား တူ ………
ကိုယ်​တိုင်​ အထုခံဖို့​တော့ စဉ်းစားမထားရှာဘူး ။
သူ့တစ်​ကာ့ ဗိုက်​ အငှားလည်​ရှာ​နေပြန်​တယ်​ ။
” ​ယောက်ျား ဘ,သား
​ယောက်ျားထဲက ဘာလား ညာလားနဲ့
ဘလား ဘလား ဘလားနဲ့
​ယောက်ျား ​တော့ဖြစ်​မှာမပါဘူး ။ ​နေ၀န်းနီ
မြစပဲရိုး says: မိန်းမ ဘသား ဆိုတဲ့စကား မရှိတော့ သများတို့ လွတ်သလား အဘနီ … :-)))
kai says: ဘသား… ဆိုတော့.. အဘရဲ့သားပေါ့….။
“မိန်းမ ဘသမီး” ဖြစ်မယ်ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ယောင်္ကျားဘသား
အောင် မိုးသူ says: ငါဟဲ့ယောက်ျား…. အမယ်လေးတော့ ခိခိ
ဦးကြောင်ကြီး says: မြန်တျန့်စစ်သား မပြစ်မှားနဲ့ တောတောင်အလီလီ ဆက်ကြေးကောက် ပြန်ခဲ့သည်။
မြစပဲရိုး says: အဘနီ ရေ့
အဲဒီ ​ယောက်ျား ဘ,သား ကြီးများ လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်း လောက်ကဘဲ ကလိမ်စေ့ဉာဏ်ဆင် ဇာတ်လမ်း ထွင်နေပါပြီ။
naywoon ni says: ဘာများပါလိမ့်​ ကျ​နော်​မသိလိုက်​ရဘူး @ အူး​ကြောင်​ဂျီး တစ်​​ယောက်​လုံး ​ရှေ့မှာမားမားမတ်​မတ်​ ရပ်​​နေတဲ့​နောက်​ မြန်​တျာန့်​စစ်​သား​တွေကို မ​စော်​ကားရဲ ပါဘူးဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Alinsett @ Maung Thura says: .ကြက်မတွန်လို့..မိုးမလင်းဘူးဆိုလား…
.ကြက်မတွေက ဘယ်တွန်မလဲ…. ကြက်ဖတွေကိုပဲ…တွန်စမ်း…လို့….တိုက်တွန်းတာ..